स्वास्थ्य /जिबनशैली – Ap Nepal
कठै सबैलाई रुहाउने उनको जिवन ! ३० बर्षको उमेरमा बच्चा जस्तै व्यवहार, के भयो यस्तो ? – हेर्नुस् (भिडियो सहित)
Posted in अन्तरवार्ता, स्वास्थ्य /जिबनशैली
भगवाले दिएको छौ त केवल सजा`य मात्रै दिएका छौ ।मला`ई यो कुन युगको सजा`य दिदैछौ भगवान नत मलाई गरिखान दियौ नत म*रिजा`ननै दियौ । पलपल हरेक क्षण मलाई आखिर चौ`ट चोट मात्रै किन दिन्छौ भगवान । यो दुनिया पनि अतिनै बिचित्रको छ,जन्मेको तीस बर्ष भयो तर उनी सात ब`र्षिय बच्चा जस्तै नै छिन् ।२०-२५ बर्षकै उमेरमा कतिले त बिहे गरेर बच्चा समेत जन्माउ`छन् ,२०-२५ बर्षकै उमेरमा कतिले त बिहे गरेर बच्चा समेत जन्माउ`छन् । बच्चाको आमाबु`वानै भैसकेका हुन्छन् तर उनी त अहिले तीस बर्ष पुगिस`किन तर उनको जीवन त केवल नर्कमा डुबे`को का*ल जस्तै नै भएको छ ।नत आ`फै खान सक्छिन नत बोल्न सक्छि|न नत हिड्न सक्छिन नत हास्न सक्छि`न नत रुननै सक्छिन । उनको ला`गि दुख के हो सुख केहो हासो केहो रोदन केहो भोक केहो निन्द्रा केहो केही पनि थाहा छैन । छिप्पिएको ती|स बर्षको उमेरमा पनि उनी अहिले`सम्म पनि बच्चा सरह नै छिन् । उक्त कथा व्य
नवलपुर जिल्लाको सिजि मन्दिर नजिकै बस्ने गरेको एक कुमाल परिवारको छोरा पिताम्बर कुमाल हेर्दै अलिक फरक किसिमका सात वर्षीय बालक यति बेला टिकटकमा भाईरल भए पछि मिडियाहरू त्यहाँ पुगेका छन्। उनको नाक को एउटा प्वाल टा*लिएको रहेछ साथै ति बालकको एउटा आँखा समेत जन्मदा बेलामा टा*लिएको रहेछ। त्यस्तै अस्पातलमा डाक्टरले उनकाे उपचार नेपालमा सम्भव नभए पनि इण्डिया लगेर उपचार गरायौं भने पनि उनको उपचार सम्भव रहेको बताएका रहेछन तर घरको आर्थिक अवस्था क*मजोर भएकाले साथै अहिले सम्म विभिन्न अपरेसन तथा दबाई हरू गर्नु परेकाले इण्डिया लगेर उपचार गराउने बजेट नरहेको ति बालक को आमाले बताएकी छिन्। बाबुलाई कसरी यस्तो अवस्था आई भनेर सोध्दा उनले येसो भन्छिन्,’ बाबु येस्तै जन्मिएको हो। जन्मिँदा पुरै अनुहार नै टालिएको थियो अनि आँखा मुख सबै खुल्ला थियो र अलि अलि खर्च गरेर काठमाडौं मा लगेर अपरेसन गरेको हो।’ जन्मेको जति
नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन भन्छन्: ” गुर्जो सेवनका कारण म ग, म्भीर स्वास्थ्य सम, स्यामा परेँ”
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आफूलाई गुर्जो सेवनका कारण स्वास्थ्यमा जटिलता आएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका महासचिवको बलिया दावेदारका रुपमा रहेका नेता पुनले एक टिभी कार्यक्रममा बोल्दै जडिबुटी से’व’न नगर्नु भनेको अवस्थामा गुर्जो खाँदा थप जटिल बनेको बताएका हुन् । ‘डाक्टरहरुले हर्बल तथा जडिबुटी नखानु भन्नुभएको थियो । तर पछिल्लो समय संक्रमण पहिलो-दोस्रो लहरमा साथीभाइ सबैले गुर्जो दिए अनि टुक्रा राखेर ग्रीन टी जसरी खाइयो,’ उनले भनेका छन्, ‘५\_६ महिना त्यसरी खाएको त्यसले लिभरमा ‘टकसिक’को रुपमा असर गरेको पाइयो।’ उनले गुर्जोका कारण आफूलाई समस्या थप गरेको र साथीहरुको पनि गुर्जोले लिभरमा समस्या पारेको सुनाएकाले पुष्टि भएको बताएका छन् । नेता पुनलाई सन १९८९ तिर जन्डिस देखिएको थियो । त्यसबेलादेखि नै उनले जन्डिसको उपचार गराउँदै आएका थिए । वि.
काठमाडौँ : नेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी, स्कुस । घर–आँगनमा सजिलै फल्ने । धेरै फल्ने । स’स्तो, स्वादिलो, सुपाच्य र स्वस्थ्यकर । स्कुस वहुउपयोगी तर’कारी । स्कुसको मु’न्टा, फल र जरा सबै स्वाद फेर्दै खान सकिन्छ । त्यससँगै स्कुस धेरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले यसले हाम्रो खाद्य भ’ण्डारलाई पनि समृद्ध बनाएको छ । मूख्य कुरा, स्कुस स्वा’स्थ्यका लागि कम्ता पो’षिलो छैन । १. पोषक तत्वको धनी स्कुसको सबैभन्दा ठूलो गुन भनेको यो तरकारी पोषक तत्वले धनी तरकारी हो । किनकि यसमा विभिन्न प्रकारका भिटामिन, खनिज, र फाइबरहरू पाउन सकिन्छ । जुन हाम्रो शरीरको लागि अत्यावश्यक छ । जस्तै, एउटा २०० ग्रा’मको स्कुसमा निम्नलिखित पोषकतत्व पाइन्छ । क्यालोरी – ३९ कार्बाेहाइड्रेड – ९ ग्रा’म प्रो’टिन – २ ग्राम भिटा मिन सी –२६ प्रतिशत क’पर – १२ प्रतिशत पोटासियम – ७ प्रतिशत म्याग्नेसियम – ५ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ । यस्तो खाले
केबल दिनको ३ वटा छोकडा खानुहोस्, १ हप्तामै मिल्नेछन् यस्ता नपत्याउँदा फाइदाहरू हेर्नुहोस्
छोकडा अर्थात् ड्राइफुडको एउटा किसिम । अंग्रेजीमा date भनिने यो फलको अर्को नाम खजुर पनि हो । चाहे छोकडा भन्नुस् या खजुर, यो फल मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै लाभकारी छ। कतिसम्म भने, तपाईंले दिनको ३ वटा छोकडा एक हप्तासम्म लगातार खानुभयो भने, त्यसले नपत्याउँदो फाइदा दिने गर्छ। त्यो फाइदाबारे जानेपछि पक्कै पनि तपाईंले यो नरम नरम, गिलोगिलो, गुलियो स्वादिलो फललाई आफ्नो नियमित आहारामा सामेल गर्नुहुनेछ । आउनुहोस्, छोकडाको नियमित सेवनले हुने फाइदाहरुबारे केही जानकारी हासिल गरौं। १. आन्द्राको क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ: छोकडाको सेवन गर्दा हाम्रो आन्द्रामा फाइदाकारी व्याक्टेरियाहरुको बृद्धि हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो पाचन प्रणालीले राम्रो काम गर्न सक्छ। जब पाचनप्रणालीले राम्रो काम गर्छ, त्यसको अर्थ त्यहाँ हानिकारक किटाणुहरु पैदा भइरहेका छैनन्, खानेकुरा राम्रो पचिरहेको छ।पाचनप्रणालीले राम्
१ महिनामै पायल्स ठिक पार्न चाहानुहुन्छ ? उसोभए औषधीका साथै यो १ चिज खानेगर्नुहोस् !
काठमाडौँ । पाइल्स रोकथाममा पनि मुलाभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन । मुलाको नियमित र सही प्रयोगबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या केही महिनामै समाधान हुने गर्दछ । यसको सबैभन्दा ठुलो फाइदा यो हो कि मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या बढ्दा पनि बढ्दैन । पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा शरीरका विशेष हिस्सामा हरेक समय पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो समस्या यस विषयमा डाक्टरलाई बताउनु हो । तर, यो गलत हो । डाक्टरसँग सल्लाह लिएर यसको उपचार गर्नु आवश्यक छ। औषधिका साथसाथ घरेलु उपायबाट पनि केही दिनमा तपाई यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्नु हुन्छ । पाइल्सका रोगीहरुलाई सामान्यतः मुला खान सल्लाह दिने गरिन्छ । यसको सबैभन्दा ठुलो कारण हो, मुलामा डाइट्री फाइबर्स पाइने गर्दछ । यसले स्टुललाई मुलायम गर्न सहयोग गर्दछ । यसबाट पाचन प्रक्रियापनि राम्रो हुन्छ । मुलामा कयौ यस्ता तत
एपेन्डिसा, इटिस रोग भनेको के हो ? यस्ता हुन्छन् लक्षणहरु ? सबैले जानी राखौं
एजेन्सी । एपेन्डि साइटिस एउटा आकस्मिक अवस्था हो । यो रोगले समयमा उपचार पाएन भने मान्छेको ज्यानै जान पनि सक्छ । एपेन्डिक्स भन्ने अङ्ग सुन्निएको अवस्थामा एपेन्डिसाइटिस हुन्छ । कहिलेकाहीँ त फुटिसकेको पनि हुन सक्छ । एपेन्डिक्स मानव शरीरमा पेटभित्र दाहिने कम्मरको अलि माथि सानो आन्द्रा र ठूलो आन्द्रा जोडिएको भागको पछाडिपट्टि रहेको अङ्ग हो । सन् १८८६ मा रेगीनाल्डले पहिलोपल्ट एपेन्डिसाइटिसका बारेमा तथ्य बाहिर ल्याएको पाइन्छ । एपेन्डिक्स एउटा पाइपजस्तो अङ्ग हो । यसको ल्युमेन बिस्तारै विभिन्न कारणहरुबाट बन्द हुन थाल्छ, र यो सुनिन्छ । सुन्निएपछि यसले एपेन्डिक्सको भित्तामा चाप दिन्छ । जुन चापका कारण भित्तमा रहेका रगतका नसाहरु बन्द हुँदै जान्छन् र पीप जम्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा पनि एपेन्डिक्सलाई अपरेशन गरी ननिकालिएमा यो फुट्न जान्छ,जसको कारण संक्रमण रगतको माध्यमबाट सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर मानि
होस गर्नुहोस्… हात खुट्टा झम-झमाउने र निदाउने समस्या छ ? हुनसक्छ शरीरमा यस्तो खरा, बी
के तपाईलाई हात खुट्टा तातेको, निदाएको, झमझमाएको महसुस भएको छ ? शरीर को अंगहरु झमझमाउने, निदाउने, पोल्ने, कारणहरु बिभिन्न छन्। जसमा के हि प्रतिशत अन्य रोगको कारणले पनि हात, खुट्टा र शरीर झमझमाउँछ। हात, खुट्टा, शरीर निदाउनु, पोल्नु, झमझमाउनु को बारेमा बुझौं।तपाइले हात वा खुट्टा निदाएको वा झमझम गरेको महसुस पक्कै गर्नु भएको छ होला । कुनै ठाउमा धेरै लामो समय सम्म एकै पोजिसन मा बसी रहदा यस्तो महसुस हुने गर्दछ। यसरी झमझम गर्नु वा शरीर को अंगहरु निदाउनु को कारण हो हाम्रो शरीर को रक्त संचार सहि तरिका ले नहुनु यानिकी जब हामी कुनै ठाउमा लामो समय एकै पोजिसनले बसेको हुन्छौँ । उक्त समय शरीको कुनै पनि अंग थिचिएको हुन सक्छ र उक्त भाग मा रगत संचालन कम हुन्छ वा रगत संचालन मा रोकिन्छ यस्तो हुदा उक्त अंग निदाएको वा झमझम गर्ने हुन्छ। यदि हामीले पलेटी कसेर लामो समय सम्म बस्यौं भने खुट्टा मा रगत संचालन कम
कास्की लगायत यी जिल्लामा फेरी देखियो यस्तो घातक पुतली, उपचारमा ढिलाई भए आँखाको ज्योति गुम्ने (भिडियो सहित)
पोखरा क्षेत्रमा हिजोआज (सापु) को संक्रमण देखा परेको छ । हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका नेत्र रोग बिषशेज्ञ डा. इन्द्र महर्जनका अनुसार विगत दुई साता देखि पोखरा क्षेत्रमा सेतो पुतलीको शंक्रमण देखा परेको बताए । आँखामा सेतो पुतलीको झुस बिजेर रातो र सुनिएका करिब २० जना बिरामीहरु हिमालय आखाँ अस्पतालमा उपचार गर्न आएको नेत्र विशेषज्ञ डा. महर्जनले जनाए । आखाँ रातो र सुनिएको अबस्थामा जति सक्दो छिटो आँखा अस्पतालमा गएर उपचार गर्दा निको हुने उनले जनाए । आखाँमा पिप परेको अबस्थामा आखाँमा सुई लगाउने र आखाँको अप्रेसन गर्ने दुई ढंगबाट उपचार गर्न सकिने भएको डा. महर्जनले जनाए । प्रायः गरी भदौं र असोज महिनामा देखापर्ने सेतो पुतलीको झुसका कर्णहरु आँखामा पर्न गएमा समयमै उपचार हुन नसके आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने डा.महर्जनले चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो दुई हप्तामा सेतो पुतलीको झुसका कर्णहरु बिजेका कारण आँखाम
वेवास्ता नगर्नुहोस्, यस्ता महिलालाई हुन्छ पाठेघर क्यान्सरको जोखिम, यी संकेत देखा परे चिकित्सकको परामर्ष लियौं
पछिल्लो समय महिलामा गर्भाशयको समस्या तिब्र रुपमा बढिरहेको छ। गर्भाशयको क्यान्सर आजभोलि आम समस्या बनेको छ। समयमै पाठेघर अर्थात गर्भाशयको क्यान्सरको लक्षण थाहा पाए उपचार सम्भव हुने चिकित्सक बताउँछन्।आज हामी तपाईलाई गर्भाशयको क्यान्सरका लक्षणका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। आउनुहोस् जानौँ कुन-कुन हुन् पाठेघरका शुरुवाती लक्षण ? १) महिनावारी असामान्य हुनु । साथसाथै कम वा धेरै रक्तश्राव हुनु । २) तल्लो पेट तथा ढाडको तल्लो भागमा पीडा महशुस हुन पनि पाठेघर क्यान्सरको शुरुवाती लक्षण हो। ३) महिलालाई छिन्छिन्मा पिसाब लाग्नु वा नियन्त्रण गर्न मुस्किल हुनु पनि गर्भाशय क्यान्सरको संकेत हुनसक्छ। ४) सम्भोगका समयमा असामान्य पीडा हुनुलाई पनि सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन्। यो पनि पाठेघर क्यान्सरको सुरुवाती लक्षण हुनसक्छ। ५) पेट फुलिएको महशुस हुनु वा पेट दुख्नु पनि गर्भाशय क्यान्सरको सुरुवाती लक्षण हुनसक्छ।